ZTE Axon 10s Pro hadda waa rasmi: qaababka, qiimaha iyo helitaanka | Androidsis
Sida uu ku dhawaaqay ZTE, ayaa Axon 10s Pro waxaa la sii daayay Febraayo 6. Taleefankan casriga ah ee cusub, oo la socda qaab-dhismeed heer sare ah iyo qeexitaanno loogu talagalay dadka isticmaala ugu baahida badan, ayaa ah kii ugu horreeyay ee adduunka lagu qalabeeyo kaarka xusuusta ee LPDDR5 RAM, sidaasna looga sii horreeyo Xiaomi Mi 10 y Nubia Cas Magic 5G, laba terminaal oo dhawaan la xaqiijiyay inay ka mid yihiin kuwa ugu horeeya ee la socda qaybtan.
In kasta oo xaqiiqda ah in ZTE aysan horay u shaacin wax tayo ah oo moobiilkan cusub ah, haddana waxaan horey u ogaanay in badan oo ka mid ah tilmaamaha ay ku faaneyso. Si kastaba ha noqotee, mahadsanid munaasabadda daahfurka ee shirkadda Shiinaha ay u fulisay si ay u xayaysiiso, waxaan ognahay kuwa kale oo badan, iyo sidoo kale qiimaha noocyada iyo helitaanka suuqa.
1 Muxuu noo fidinayaa ZTE Axon 10s Pro cusub?
Muxuu noo fidinayaa ZTE Axon 10s Pro cusub?
Si laga bilaabo, ZTE Axon 10s Pro maahan taleefan casriyeysan oo waxbadan kaga duwan kan Axon 10 Pro asalka ah ee qaybta bilicsanaanta. Xaqiiqdii, waxaan dhihi karnaa inay ficil ahaan la mid tahay ka horreeyay. Si kastaba ha noqotee, kala duwanaanshaha weyn waxay ku hoos jiraan daboolkiisa. Terminal-kan cusubi wuu ka awood badan yahay mahadnaqa chipset-ka Snapdragon 865 Waxaa ku qalabaysan 6 ama 12 GB RAM xasuusta.
Sidii aan nidhi, Nooca RAM ee qalabkani ku faano waa LPDDR5. Waxaa mudan in markale la adkeeyo in ay tahay taleefoonkii ugu horeeyay aduunka ee ku faano kaarka noocaas ah. ZTE ma cayimin soo saaraha kaarka RAM ee Axon 10s Pro, laakiin Micron wuxuu bixiyaa xawaare gudbin ah oo gaareysa 6.4 GB / s. Sidoo kale, xaga xawaaraha, waxay labanlaab ka dhigantahay LPDDR4 waxayna leedahay 20% waxqabad kafiican LPDDR4x RAM. Tan waxaa u dheer, xawaaraha helitaanka xogta wuxuu ku kordhay 50% gudaha LPDDR5.
Marka loo barbardhigo jiilkii hore, Micron's LPDDR5 wuxuu cunaa 20% awood ka yar. Sababtoo ah LPDDR5 way ka dhakhso badan tahay, xawaaraha hawsha iyo hawlgalka ee codsigu sidoo kale wuu dhakhso badan yahay. Tani waxay ka dhigan tahay inay ka caawinayso batteriga guurguura inuu adkeysto 10%.
Faa'iidooyinka kaarka LPDDR5 RAM ee taleefanku helo waxaa sidoo kale ka faa'iideysanaya nidaamka keydinta ee UFS 3.0, taas oo ka dhigaysa in xogta si fiican loo akhriyo celceliska. Waxaa jira laba nooc oo ROM ah: mid 128GB ah iyo mid 256GB ah.
Kaamirooyinka ZTE Axon 10s Pro
Shaashadda aan helno waa a 6.47-inch xagal AMOLED leh FullHD + xallinta 2,340 x 1,080 pixels (19.5: 9), darajo u eg qaab dhibic biyo ah iyo akhristaha shaashadda shaashadda ku jira. Marka loo eego astaanta, waxay ku faantaa isticmaalka 92% ee hore.
ZTE's Axon 10s Pro sidoo kale wuxuu adeegsadaa kamarad gadaal saddex laab ah ah. Kani wuxuu ku yaalaa si la mid ah qaabka moduleka Axon 10 Pro uu yahay, geeska bidix ee kore iyo toosan. Dacwada sare waxay kujiraan labada dareemayaal ee ugu horeysa 8 MP (lens telephoto leh f / 2.4 aperture) iyo 48 MP (santuuqa weyn ee f / 1.7 aperture), isla isla nidaamkaas kor ilaa hoos. Hoos u sii soco, ka sarreeya iftiinka LED-ka, waa muraayadaha balaaran ee 20 MP oo leh aragti 125 ° ah iyo f / 2.2 aperture. Sawirada iskaa wax u qabso, wicitaanada fiidiyowga iyo nidaamka aqoonsiga wajiga, waxaa jira kamarad hore oo ah 20 MP (f / 2.0).
Waxa kale oo jira a 4,000 mAh baytariyada awoodda leh oo leh taageerada Qualcomm Quick Charge 4 + tiknoolajiyada xawaaraha degdegga ah. Marka la eego isku xirnaanta, moobilku wuxuu leeyahay Wi-Fi 6 iyo Bluetooth 5.0. Waxay sidoo kale leedahay Link-Booster, kaas oo isku daraya shabakadaha maxalliga ah iyo kuwa gacanta si loo hagaajiyo xasilloonida isku xirka iyo kordhinta xawaaraha illaa 50%. Tan waa inaan ku darnaa in wax walba lagu maareeyo hoosta 'Android 9 Pie interface' (oo la cusbooneysiin karo Android 10 ugu dhakhsaha badan) oo lagu daboolay MiFavor 10.
MUUQAAL 6.7-inji AMOLED leh FullHD + xalka 2.340 x 1.080 pixels (19.5: 9)
KAAMARKA DARYEELKA Triple 48 MP (weyn) + 20 MP (xagal ballaaran) + 8 MP (telephoto)
CAMERA HORE 20 MP
XUSUUSTA GUDAHA 128 / 256 GB
BATARY 4.0 mAh oo si dhakhso leh lacag uga qaadaysa 4 +
NIDAAMKA HAWLGALKA Android 9 Pie oo ka hooseeya MiFavor 10
XULASHADA XIDHIIDHKA 4G LTE. 5G. Bluetooth 5.0
ZTE Axon 10s Pro waxaa lagu heli doonaa midabyo cad, madow iyo midabbo leh iyo laba nooc oo RAM iyo ROM ah: 6GB + 128GB iyo 12GB / 256GB. Hadda Lama oga inta ay ku kacayaan noocyadan iyo waliba suuqyada ay ka bilaaban doonaan. Si kastaba ha noqotee, waxay u badan tahay inay marka hore gaarto Shiinaha ka dibna ay ku fidiso dhulal kale. Shirkaddu waxay la soo xiriiri doontaa faahfaahintaan goor dambe.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » ZTE Axon 10s Pro horeyba waa rasmi oo sidoo kale mobiilkii ugu horreeyay ee leh LPDDR5 RAM
Marnaba ma iibsan doono Nubia ama ZTE mar labaad, waxaan haynaa laba NX591J iyo NX569H, labada sano ee aan haysto, waligey ma helin casriyeyn android ah oo ka socota 7.1.1 (UI v5) ilaa 8 ama 9 kii kalena wuu sii joogay 6.1 (ui v4), taleefan ahaan wax dhibaato ah nagama soo gaadhin. Marka la iibiyo, waxba sidii loo ballanqaaday. ceeb ah
Tilmaamaha buuxa ee iQOO 3 waxaa laga diiwaan galiyay TENAA